🥇 ▷ Badda Tuugada: Dukaanka Ingame wuxuu bilaabmayaa 18 bilood ka dib markii la siidaayay ✅
Badda Tuugada: Dukaanka Ingame wuxuu bilaabmayaa 18 bilood ka dib markii la siidaayay
Xitaa kahor intaan la sii deyn Badda Tuugada, Rare wuxuu ku dhawaaqay qorshooyin lagu maalgalinayo howlgalka iyo horumarinta ciyaarta burcad badeeda iyada oo loo marayo macaamil ganacsi. Asal ahaan dukaanka ciyaarta dhexdeeda waxaa la rabay in la helo seddex bilood ka dib markii la siidaayay, haatan waxay soo rogtay 18. Faa’iidooyinka ciyaarta aan la iibin.
Meel looga wada heli karo menu-ka weyn iyo ciyaarta gudahiisa, Pirate Emporium waxay ku iibisaa xayawaannada guryaha sida daanyeero iyo daanyeero, niyadda iyo maqaarka maraakiibta burcad-badeedda. Waxaad ku bixinaysaa “Qadiimad Qadiim ah”, lacagta cusub ee lacagta qaaliga ah ee ciyaarta.
Lacagta waa in la iibsadaa
Waxaa laga iibsan karaa xirmooyin kala duwan oo leh cabbir u dhexeeya 150 iyo 4,250 gogo ‘qiime u dhexeeya qiyaastii laba iyo 35 yuuro. Qaddarka lacagta ayaa waliba ciyaartoy u ah sidii ay ugaadhsadaan ka dib markii ay ka adkaadeen qalfoofyadii hore. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa inay noqdaan “yaab yaab lehMarkaa, Rare wuxuu tilmaamayaa in lacagta la iibsado marka hore si loo helo waxa ku jira dukaanka.
Qiimaha Qadaadiicii Hore
Xayawaanku waxay qiimahoodu gaarayaa ilaa 500 oo lacagta qadarta ah oo dukaanku leeyahay ilaa 5 yuuro. Horeba midab kale oo wehelka ah isla qiimaha ayaa loo yaqaanaa, dharka ka baxa daanyeerrada iyo qiimaha wadarta ah 250 qadaadiicda sidaasna ku dhow 2.50 yuuro. Emotesku waa qiyaastii 150 qadaadiic ah. Kuwa ugu qaalisan ayaa soo bandhiga maqaar Bano Kazooie oo loogu talagalay maraakiibta, taas oo ku kacaysa kaliya 2,500 lacagta qadaadiic ah oo isugeyn ah, oo u dhiganta 23 euro. Si kastaba ha noqotee, laba “noocyo kala duwan oo lacag ah” oo hargaha ah oo shiraacyada iyo sawirada isu sawiraya ayaa qiimihiisu yahay 1,600 oo qadaadiic dheeri ah ama qiyaastii 16 euro.
Sanaadiiqda doofaarka ayaa wali ah tabaaleysan
Iyada oo qayb ka ah ku dhawaaqida soo-saare dukaanka Rare wuxuu xaqiijinayaa tilmaamaha horaantii hore loogu dhawaaqay tilmaamaha guga ee iibinta alaabada ciyaarta. Beuteboxen ama farsamooyin la mid ah lama heli doono, ayaa lagu sheegay xayasiiska. Dhamaan iibsiyada waa inay ahaadaan ikhtiyaar, siyaado ayaa ah kuwo isku qurxiyo oo waa ay lahaan karaan “saameyn kuma laha xirfadaha, heerka ama waxqabadka“Ciyaartoyga. Waxa jiri doona wareegyo dhiirrigelinaya iibka oo soo jeedinaya yaraanta aan dabiici ahayn, si kastaba ha noqotee.